I-WPide: I-Plugin Yomhleli Wefayela Emnandi yeWordPress | Martech Zone
I-WPide: I-Plugin Yomhleli Wefayela Emnandi ye-WordPress
NgeSonto, Septhemba 22, 2013 NgoMgqibelo, Septhemba 21, 2013 Douglas Karr
Njalo ngezikhathi ezithile uneklayenti elikhiya amaseva alo emazingeni angenangqondo. Sihlala sinezimbalwa zazo njengoba sisebenza futhi mhlawumbe nabasebenzi bakho be-IT benza okufanayo. Kuyakhathaza… ubuchwepheshe kufanele bube khona ukukuvumela, hhayi ukukukhubaza. Ukungakwazi ukuhlela okuthile okuyisisekelo njengefayela lengqikimba kungakhathaza kakhulu. Namuhla ebusuku benginomsebenzi onjalo… nokukhungatheka ngawo.
Njengenye indlela yokuxhuma nge-FTP noma i-SFTP, ngenze okuthile ngafuna imenenja yefayela ngaphakathi kwe-plugin ku-WordPress. Ngivivinye ama-plugins angaba yishumi nambili futhi kwenzeka ngaphesheya WPide… Hewu. Kulula ngokuphelele ukufa… isihlahla sefolda kwesokudla nesihleli ngakwesobunxele. Yilokhu umhleli wangaphakathi we-WordPress okufanele abukeke! Umhleli unekhodi enezinombolo nemibala yokwenza izinto zibe lula ngokwedlulele.
Abanye benu bangasehlangothini lwezokuphepha futhi bacabange ukuthi engikwenzayo ngamantongomane… ukuhlinzeka nge-plugin efinyelela wonke amafayela ngaphakathi kwe-WordPress kunoma yimuphi uMlawuli? Kulungile… umlawuli angachofoza kusula kungqikithi kalula nje njengoba engachofoza ukuhlela kulo mhleli… noma isihleli esizenzakalelayo. Inkinga ngomhleli ozenzakalelayo ukuthi awunawo umuthi wefayela ongachofoza kuwo ukuze ufinyelele kumafayela akho, noma kunjalo.
Tags: hlela ifayelai-plugin yomhleliisikhundla sabaphathi befayelaimenenja yefayelai-plugin yemenenja yefayelaumuthi wefayelaWordPressifayela lokuhlela i-wordpressplugin wordpress
Ukuvuselelwa kwe-Meltwater Buzz: Curation, Value and Authority